Mpanamboatra kojakoja elektrika tsy misy rano sy vovoka & harafesina - Shina Fitaovana elektrika tsy misy rano sy vovoka & gorodona Mpamatsy sy orinasa
Jiro sy fanilo tsy mipoaka
Jiro LED tsy mipoaka
Jiro vonjy maika tsy mipoaka
Jiro fluorescent tsy mipoaka
Jiro finday tsy misy fipoahana
Jiro hafa tsy mipoaka
Fitaovana elektrika tsy misy fipoahana
Boaty fanapariahana tsy misy fipoahana
Hetsika tsy mipoaka, boaty fanaraha-maso
Circuit Breaker tsy mipoaka
Starter tsy mipoaka
fipoahana porofo Connection Box
Pipe tsy mipoaka
Ny plastika rehetra tsy mipoaka
Fitaovam-pitaovana elektrônika tsy misy fipoahana sy korosi
Jiro tsy mipoaka sy tsy mety harafesina
Fitaovam-baravarana sy socket tsy misy poizina
Mpankafy tsy mipoaka
Toeram-pisakafoanana tsy mipoaka
Rano & vovoka & harafesina
Fitaovana elektrika tsy misy harafesina sy rano sy vovoka
Jiro tsy mety harafesina ny rano sy ny vovoka
BAD63-A andiany fipoahana-pr...
FCT93 andian-tsarimihetsika fipoahana ...
FCD63 andian-dahatsoratra tsy mipoaka ...
FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B afo ...
SFCX andian-drivotra rano sy ny harafesiny faladiany boaty
1. Faritra misy orana bebe kokoa, hamandoana bebe kokoa ary tifitra sira mahery kokoa.
2. Ny tontolo iasana dia mando ary misy toerana misy etona rano.
3. Tsy mihoatra ny 2000m ny haavony.
4. Ny tontolon'ny asa dia misy vovoka tsy mirehitra toy ny fasika sy vovoka.
5. Ny tontolo iasana dia misy entona manimba toy ny asidra malemy sy ny fototra malemy.
6. Azo ampiharina amin'ny solika, simika, sakafo, pharmaceutique, miaramila, trano fanatobiana entana ary toerana hafa.
7. Ampiasaina indrindra amin'ny fitsinjarana herinaratra ho an'ny asa vonjimaika na finday.
SFK-g andian-drivotra rano sy ny harafesiny fanaraha-maso boaty (stainless vy fefy)
7. Ampandehano amin'ny lavitr'ezaka na ankolaka ny fitaovana elektromagnetika eo amin'ny manodidina ny motera voafehy, ary diniho ny fiasan'ny faritra voafehy amin'ny alalan'ny fitaovana elektrika sy jiro famantarana.
SFK-L andian-dahatsoratra Water & vovoka fanaraha-maso boaty
SFJX-S andian-drivotra Rano & harafesina porofo junction board (feno plastika fefy)
7. Fifandraisana ho an'ny jiro, hery, fanaraha-maso ary fifandraisana.
SFJX-L andian-dahatsoratra Water dust porofo junction board
SFZ-g andian-dahatsoratra Water & vovoka & corrosion-porofo fandidiana lahatsoratra (stainless vy fefy)
SFZ-S andian-drivotra rano sy ny harafesina porofo fandidiana post (feno plastika fefy)
LNZ andian-dahatsoratra Water & dust proof operation post
SFDZ andian-drivotra Rano & harafesina porofo circuit breaker
7. Ins sy outs ny circuit tsy matetika, ary miaro ny fanaraha-maso ny circuit amin'ny overload sy short circuit.
SFM(D)G- Rano sy vovoka & harafesina jiro (hery) boaty fizarana
7. Overload, short circuit ary arovy ny faritra voafehy ary ampiasao ho toy ny jiro (hery) ho an'ny tsipika sampana tsirairay.
SFK-S-Rano vovoka sy harafesina boaty fanaraha-maso (feno plastika fefy)
andian-dahatsoratra SFM Rano vovoka-porofo tariby-clamping connector D Type
1. Ambient mari-pana dia: -25 ℃ ~ 55 ℃;
3. Mety amin'ny fampiasana ny harafesina amin'ny asidra matotra, alkali, amoniaka, sira sy chlorine, rano, vovoka ary atmosfera mando;
4. Izy io dia ampiasaina amin'ny fantsona fantsona amin'ny solika, orinasa simika, sakafo, fanafody, miaramila ary toerana fitehirizana.
12Manaraka >>> Pejy 1/2
No. 388, Guodao Road, Qixing Town, Nanhu District, Jiaxing City